Chii The Best National Parks In Europe | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > Chii The Best National Parks In Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Norway, Chitima Kufamba Switzerland, Famba Europe
Uri anoda guru panze? Tiri kutaura masango, munyanza, flora, nemhuka. Kufamba mutsoka, cu, uye huwandu hwakanaka hwemhepo nyowani. Zvadaro nekuwana yakaisvonaka National Parks mu Europe, uye sei kuti ikoko nechitima.
Kunyange kushanyira rwokuzvarwa zvinokwezva Masango akadai anogona kuva dzakaoma ari chitima rwendo, Ndicho chikonzero asava navo. Izvi zvakasikwa zvinokwezva kuuya musiyano wakakwana kuna kubatikana maguta, uye nechinguva chidiki chekutsvaga, muchaona vari Zvinoshamisa nyore kusvika nerubatsiro Save A Train.
Pasinei zita rayo dzinovhiringidza, Saxon Switzerland National Park zvikuru kwazvo Jerimani. Inzvimbo yakakura yakasikwa inopinda kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweCzech Republic. Ndiyo nyika chete dombo National Park, asi zvakare akafukidza kunoshamisa masango. Vazhinji misoro kudunhu kukwira, asi pane imwe nhoroondo dzakaitika kuongorora, kusanganisira Konigstein Fortress.
Paunenge uri Germany, isu zano nemiwo vanoshanyira Black Forest. Zvichida nechepakati Europe wakakurumbira zvikuru dondo, uyu haasi kupotsa. Iyi inokatyamadza nzvimbo ine makomo kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweGerman ine zvese - gobvu rakasvibira rinogara rakasvibira masango, zvinoshamisa makomo, uye sokunofadza nemisha. Zviri musha neshiri yegungwa nenguva yeko chaiko kune 1700s, uye misha mizhinji inzwai eerily yakanamatira munguva iri kure. The upenyu hwaAbhigairi hwaizova chadenga anongokurukurwa zvakakwana zvizere nokuedza nenyika chaiyo, kana kuti ndizvo zvauri kutsvaga!
Imwe yenzira ruzivo ari Black Forest ari nechitima. The Black Forest mutsetse anomhanya pakati Offenburg uye Konstanz. Inopa zvinoshamisa maonero enharaunda uye inomira mumataundi akawanda munzira.
Hallerbos Forest, kana "The Blue Forest", ndiyo zvinoshamisa sango wakakwana nokuda refu yevedza hikes. Iwo makapeti akakura ebhuruu anopinda mukati pemwedzi April gore rega rega ipa sango rakanaka zita raro. Panewo hofori Sequoia miti kuti vanoita kushanya kune ichi tatamuka wenyika rejuvenating ruzivo rwakanaka.
Ona kuti nguva yakanakisisa kushanyira Hallerbos kubata bluebells chakasiyana ose gore uye kunobva okunze. Nokukurumidza tembiricha inokwira, nokukurumidza maruva anotumbuka. Zvino chingava chikuru nguva kuenda, sezvo zvinoita sekunge kwadziya zvishoma gare gare kupfuura pakati paApril gore rino. Asi rudzi pamusoro nguva sezvo mamiriro okunze anodziya kunorevawo kuti miti kuwana mashizha shure, nokunyima bluebells chezuva, izvo zvinoita uchatendeukira grayish. No zvakanaka zvenyu Instagram pics!
Kana uri urongwa refu kudii, kuva nechokwadi bhegi rokuenda mudzira: mvura pano vari rine hove. Vafudzi vemhembwe vanozoona kuti Hardangervidda iri pakati pemapaki emarudzi akanaka kwazvo kwavari, sezvo ayo mapoka mamwe pakukura munyika. Hapana akafanana kuona zviuru poro zvinofamba maererano mhiri mumapani; chinhu pamberi wose anofanira kuona dzimwe nguva muupenyu hwavo.
Kamwe uri Oslo, unoda kusvika Hardangervidda nechitima Unogona kutora chitima kubva Oslo kuna Bo muna Telemark. Kubva ipapo unogona kubata “Haukeliekspressen” kuna Rauland. Unogona zvakare kutora Bergen Railway kubva Oslo kuti nhamba panzvimbo dziri pokutangira zvikuru pfungwa kuti kuongorora Hardangervidda - Flam kuna Myrdal, Finnish, Haugastol, Ustaoset, uye Geilo.
Kubva Bergen kuna Hardangervidda nechitima, Iyo Bergen Railway inomira pane dzinoverengeka nzvimbo dzakanakisa kutanga mapoinzi ekuongorora Hardangervidda - Myrdal, Finnish, Haugastol, Ustaoset, uye Geilo. Munokwanisa kutora chitima Voss uye bhazi kubva Voss kuna Eidfjord.
Akagadzirira kuwedzera zvimwe zvakanaka National Parks muEurope yenyu bhakiti mazita? Regai Chengetedza Chitima kukubatsira ikoko nokukurumidza, uye pasina akawedzera, zvakavanzika mari.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnational-parks-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Europepark	#Mapaki eNyika	#wemusic	europetravel	longtrainjourneys	Train Travel	travelbelgium	travelgermany	travelnorway	traveltips
3 Maguta eEurope Akanyanya Kushanyirwa NeChitima
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Spain, Famba Europe